သစ္စာအလင်း: October 2012
သီတင်းကျွတ်လပြည့် နေ့ ဓမ္မလက်ဆောင်...
ခင်ပွန်းကြီး ၁၀ပါးကန်တော့ ခြင်းကို လပြည့်ည မှာ ကျေးဇူးတော်ရှင် ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရား ရဲ့ တရားတော်ကို ဖွင့်လှစ် နာယူပြီး ခေတ္တတည်းခို နေတဲ့အခန်းမှာပဲ ဆီမီးသုံးတိုင် နဲ့ ကန်တော့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..။ နေရာ ဒေသ နဲ့ လှူဘွယ် ဝတ္ထု မပြည့်စုံသော်လည်း စိတ်စေတနာ ပြည့်ဝစွာ မာန်ချ ကန်တော့ခဲ့ပါတယ်..။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 11:33 PM0မှတ်ချက်ရေးရန်
*ဘဝပန်းခင်း များပေါ် သို့ ဓမ္မ မိုးစက် ပွင့်များ*( ပန်းကမ္ဘာ ဘုန်းဘုန်း အရှင်သုနန္ဒာလင်္ကာရ.. မွေးနေ့အမှတ်တရ)
စိတ်ကူး ထဲက မျှော်မှန်း ချက် နဲ့ လက်တွေ့ ဘဝ ကွာဟ လေတိုင်း ….၊
တစ်ခါတစ်ခါ ကြိုးစား အားထုတ်မှုတွေ နဲ့ ..ပန်းလျလာတိုင်း ၊
ပိုင်းဖြတ် နိုင်ခဲ့ သော ဆုံး ဖြတ်ချက်တို့ သည် ယိုင်နဲ့နဲ့ ဖြစ်ရ လေတိုင်း
ယုံကြည်ရာ လမ်းကို တည်ကြည် ခိုင်မတ် စွာ လျှောက်လှမ်းနေသူတို့ ရဲ့ ခြေလှမ်းများကို မှန်းဆ ကြည်ညို တန်ဘိုး ထားမိပါတယ်..။ အားကျ မျှော်ငေး ရင်း ကိုယ့်ရဲ့ ယိုင်နဲ့ သွားတဲ့ ခြေလှမ်းတွေကိုတည့်မတ် ရပါတယ်..။
ယုံကြည်ချက် ခံယူချက် တွေ နဲ့ ချီတက်နေသူတိုင်း ဟာ အဆန်လမ်းကို ဆန်တက်ရတာ ဖြစ်လေတော့ ချောမွေ့ နေသော ပန်းခင်းလမ်း တော့မဟုတ် ကြောင်းကောင်းကောင်း နားလည် ခဲ့သည်လေ..။
ဒီလို ဒီလို နဲ့ ကိုယ့်ရွေးချယ် ရာ ဘဝခရီးကို လျှောက်လှမ်း နေသူတွေ ကို ခံစားမှု နဲ့ နှိုင်းဆရင်း လေးမြတ်ကြည်ညို ရပါတယ်..။
အဲလို သူများထဲမှာ *ပန်းကမ္ဘာ ထဲက ဓမ္မနန်းတော်* ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့
ပန်းကမ္ဘာ (http://www.dhammayaungchi.com ) နဲ့ ဓမ္မနန်းတော် ဓမ္မ ဘလော့ (http://www.dhammapalace.org/ ) များကို ဖန်တီးတဲ့ ..ကျွန်မ က ပန်းကမ္ဘာ ဘုန်းဘုန်း လို့ ခေါ် တဲ့ ဘုန်းဘုန်း အရှင် သုနန္ဒာ လင်္ကာရ လည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်..။
ပန်းကမ္ဘာ ဘုန်းဘုန်း ကလည်း ကျွန်မတို့ နဲ့ ဓမ္မစာပေရေးသားသူများအဖြစ် သိကျွမ်းကြည်ညို ရတာ အတော်တောင်ကြာခဲ့ပါပြီ..။ သုံးနှစ် နီးပါးတောင်ရှိခဲ့ပါ ပြီ။
ဘုန်းဘုန်း ကို ၁၉၇၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက် နေ့မှာ မွေးဖွား ခဲ့ ပါတယ်..။ မနက်ဖြန် ဆို ဘုန်းဘုန်း အသက် ၃၄ နှစ်တင်းတင်းပြည့်ပါတော့မယ်..။ ကျွန်မတို့ ဆရာ-ဒကာ ရင်းနှီး မှု ဟာ ဓမ္မ အားဖြင့် ဆက်နွယ်မှု သက်သက်သာ ဖြစ်ခဲ့တာ အမှန်ပါ..။
ကျွန်မ ရဲ့ သစ္စာအလင်း ဘလော့ဂါ ဘဝသည်လည်းအခုလာ မဲ့ ဒီဇင်ဘာ ဆို ၃နှစ်ပြည့်မြောက်ပါတော့မယ်..။ ဓမ္မဘလော့ဂါ ဘဝမှာ ခင်မင် ရသူတိုင်း ဓမ္မ နဲ့ ယှက်နွယ် သော ဓမ္မစကားများကို သာ ဆိုကြ ကာ နေတာ မို့ ဓမ္မရတနာ သဖွယ် လေးနက်စွာ တန်ဘိုးထားခဲ့ ပါတယ်..။
ဘုန်းဘုန်း ရန်ကုန်ကြွ ရောက် စဉ် ကာလမှာ ကျွန်မ ဆွမ်းမကပ်ဖြစ်ပေမဲ့လည်း ဘုန်းဘုန်းက ကျွန်မ ရေး တဲ့ပိုစ့်တိုင်းကို ဖတ်ဖြစ်တာ..ဝေဖန်ပေး တာ ခုချိန်ထိ မပျက်ကွက်ခဲ့သေးပါ..။ ကျွန်မ ကတော့ ဘုန်းဘုန်း ရေးတဲ့ ဆောင်းပါးတွေ ထဲက အဆီအနှစ်တွေ မှတ်သားထုတ်နှုတ်ပြီး မှတ်ချက် ဘယ်တော့မှ ရေးလေ့ မရှိခဲ့ပါ..။
ဘုန်းဘုန်း ရေးသားတဲ့ ခရီးသွားဆောင်းပါး များကလည်းအချက်အလက် စုံစုံလင်လင် ၊ ဓာတ်ပုံတွေ ပြည့်ပြည့်ဝဝ နဲ့ စာတမ်းတစ်စောင်ဖတ်ရသလို မျိုးပါ။
ပရဟိတ လုပ်ငန်း တွေကိုလည်း မြန်မာပြည် ပြန်ရင်း အိန္ဒိယ မှာ ပါရဂူ ဘွဲ့ အတွက် ကျမ်းပြုရင်း ထက်ထက်သန်သန်ဆောင် ရွက် နေတာ လေးစားကြည်ညိုရပါတယ်..။ စာသင်သားတွေ အတွက် ကျမ်းစာ အုပ်များလှူဒါန်းစီစဉ်ပေးတာက စပြီး *ဓမ္မနန်းတော် * ဘလာ့ကို တည်ဆောက် ဖြစ်ခဲ့တာ http://www.dhammapalace.org/ အထင်အရှား မို့ တကယ့်ကို အားကျ အတုယူ စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..။
ကျွန်မ အတွက်အကြိုက် ဆုံး နဲ့ ဖတ်ဖြစ် တာကတော့ ဘုန်းဘုန်းစုဆောင်းထားတဲ့ကဗျာ များ ပဲဖြစ်ပါတယ်..။
****သူငါကစ၊ ရှိသမျှလည်း၊ နေ့ညဉ့်မလပ်၊ အစဉ်စပ်လျက်၊ ဥပါဒ်-ဌီ-ဘင်၊ မပြတ်နှင်လျက်၊ ပျော်ရွှင်စရာ၊ မရှိပါဘဲ၊ ဖျားနာကိုက်ခဲ၊ ရောဂါစွဲ၍၊ သေပွဲသေတမ်း၊ သေစခန်းနှင့်၊ သေလမ်းသို့သာ၊ နီးကပ်လာ၏။
ငါငါတက်ကြွ၊ မာန်မာနနှင့်၊ လောဘဒေါသာ၊ အစဖြာသား၊ ယုတ်မာစွာလှ၊ အဓမ္မကို၊ ဝေးကမလာ၊ ကင်းရှင်းကွာအောင်၊ ခါခါမပွား၊ အပျင်းများမူ၊ လေးပါးပါယ်ရွာ၊ နင့်အိမ်သာဟု၊ စိတ်မှာစွဲကပ်၊ သတိချပ်လော့။
လူ့ရပ်နတ်ရွာ၊ ထက်ဗြဟ္မာနှင့်၊ မဟာသုခ၊ နိဗ္ဗာနသို့၊ ရှစ်ဝမဂ္ဂင်၊ သင်္ဘောယာဉ်ဖြင့်၊ ဆောလျင်ကပ်ခို၊ ရောက်ရလိုမူ၊ ထိုထိုပုည၊ ကုသလကို၊ နေ့ညမစဲ၊ လုံ့လသဲလော့..****
( လယ်တီ ဆရာတော်ကြီး )
အခု လို သံဝေဂ ရေစီး သည် ဘဝ ထဲသို့ အရှိန်အဟုန် နဲ့ စီးဆင်းလာစေမဲ့ လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ ရှားပါး ကဗျာ သံဝေဂလင်္ကာ ကဗျာ မျိုး ကိုလည်း ဘုန်းဘုန်း စုဆောင်းထားပါသေးတယ်..။
ပညာတတ်-ပညာရှိ သူတော်ကောင်းရဟန်းတစ်ပါး အတွက် ထိုက်တန်သော စကားလုံး ရှာဖွေရန် ရင်ခက်ခဲနေခဲ့လို့ Comments တွေ မှတ်ချက်တွေ ရေးသားဘို့ အမြဲ ပျက်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအတွက်တော့ ဘုန်းဘုန်း အတွက်မွေးနေ့ ပူဇာ ဓမ္မစာဖြင့် တောင်းပန်ရပေအုံးတော့မယ် လေ..။
ဘဝဆိုတာက လည်း မေ့လျောစေတတ်တာတွေ တစ်ပုံတစ်ပင် ရှိနေတာမို့ ဝိပဿနာ မည်မျှသိသိ သံဝေဂ လှိုင်းများမရိုက်ခတ်လျှင် ဒုံရင်းပြန်ဆိုက်တတ် တာမျိုးမဟုတ်ပါလား။
အရာရာ မှာ ဆန့်ကျင်ဘက်တွေ ရောပြွမ်း နေတာ မှာ အားပြိုင် နေရတာ ကိုက ဘဝပါပဲ…ဒါသည်ပင် လောက ပါပဲ ရယ်လို့ လက်ခံ လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်..။
လောကရဲ့ သဘောကတော့ *အနိစ္စ ၊ဒုက္ခ၊ အနတ္တ လက္ခဏာ* သုံးပါးသာ ဖြစ်တာမို့ လောက နဲ့ အလိုက်သင့်နေထိုင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်..။
ဘဝ ဆိုတာ ကို ငယ်ရွယ်စဉ်ကာလ တုံးကတော့ *ရုပ်ရှင် ဒါရိုက်တာ* တစ်ယောက်လို လုပ်ဆောင် ဖြစ်သန်းမိခဲ့တယ်..။ ဒီအခန်းမှာ ဒီလို သရုပ်ဆောင်မယ်၊ ဒီနေရာမှာ ဒီလို ရီမောပျော်ရွှင်စေ.လိုက်မယ် .ဒီအခန်းမှာ တော့ ငိုကြွေး လောင်မြီုက်စေ..။
ဒါပေမဲ့လည်း ဘဝ ဆိုတာ ဒါရိုက်တာ ကြည်ရှု ရိုက်ကူးပေးနိုင်အောင်အကွက်ကျ စီစဉ် ရေးသားထားတဲ့ဇာတ်ညွှန်း တစ်ပုဒ် မဟုတ်လေဘူးဆိုတာ…ကို သိနားလည် လာချိန်မှာတော့ ကျရာအခန်းက ပိုင်နိုင်အောင် ကပြနိုင်တဲ့ *ဇာတ်ဆောင် မင်းသမီး* လို ကျင့်သုံး လွန်မြောက် ရ ပြန်ပါတယ်..။
နှလုံးသားကိုဖြတ်သန်းသွားတဲ့အရာ တိုင်းဟာ ပျော်စရာ ဖြစ်စေ… ဝမ်းနည်းကြေ ကွဲ စရာဖြစ်ပစေ.. ခံစားလိုက်ရတိုင်း ပန်းလျကျန်ခဲ့ရတာ အမှန်ပါပဲ..။
ကျေးဇူးတော်ရှင်ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရား ကြီး ရဲ့ အဆုံးအမ တရားတော်တွေ ကြောင့် အာရုံ နဲ့ ဒွါရ တိုက်လို့ ပေါ်လာတဲ့ ခန္ဓာ ငါးပါးသည် မီးသည်သည် မျှသာ ….ဒုက္ခသစ္စာ စစ်စစ် ဖြစ်တယ် ရယ်လို့ နာယူ နှလုံးသွင်းဖြစ် ခဲ့ ပါတယ်..။
ဒီလိုတွေ ဖြစ်လာရတာ များလာချိန်မှာတော့ ကျွန်မ ဟာ မနောတံခါးမှာပေါ်လာသမျှကို ….(တနည်း) ဘဝဖြစ်စဉ် တွေကို *ပွဲကြည့်ပရိသတ်* လို ဖြတ်သန်း ဘို့သာ ကြိုးစားပါတော့တယ်..။
ဖလင်ကွက် မှ ပုံရိပ်များ တစ်ကွက်ဆီ တစ်ကွက်ဆီ ရွေ့ လျား သွားနေ တာမို့ ရုပ်သေ တို့သည် ရုပ်ရှင် ဖြစ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါလား.။ ဒါသည်ပင်လျှင် ဘဝ ..ဒီဘဝ ဒီအလုပ် သာရှိတယ် လို့ နှလုံးသွင်း နေထိုင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစား ပါတော့တယ်..။
ကျွမတို့ ရဲ့ မနောဒွါရ ဟာဒယ ဝတ္ထု မှာ အတွေးဆိုတဲ့ ဓမ္မာရုံ တွေ တိုက်ဆိုင် ဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါ ကြံသိစိတ်ဆို တာလေးတွေ ကလည်း ပေါ်ပေါ် လာလိုက်တာ ….ဖလင် အကွက်စီသလိုပါပဲလေ..။
ဒါကို သက်ဝင်လှုပ်ရှားအောင် တစ်ပုံ ကနေ တစ်ပုံ ကူးစေတာ..ရုပ်သေမှသည် ရုပ်ရှင် ဖြစ်စေတာကတော့ *တဏှာ* ဆိုတဲ့ ဒါရိုက်တာ တစ်ယောက် ရှိနေတာ အမှန်ပါပဲ လို့ ကျေးဇူးတော်ရှင် မြတ်စွာ ဘုရား က လက်သည် တရားခံကို ထုတ်ဖေါ် ဟောကြားခဲ့ပါတယ်..။
ဒုက္ခယှက်လိမ် ခန္ဒာ အိမ်ကို ကြိမ်ကြိမ် ကြိုးကုတ် တည်ဆောက်လုပ်သည် ..အကြောင်းရင်းသမုဒယ သစ္စာ ဖြစ်သော တဏှာ ယောင်္ကျား လက်သမား ရယ် လို့ အမည် တပ်ပေးခဲ့ပါတယ်..။
တစ်ခါ တစ်ခါ လူတို့ ၏ မှားယွင်းဖေါက်ပြန်ကြသော ကိစ္စ တို့ကို တွေ့ကြုံရလေတိုင်း ဆိုးလိုက်တာနော်.. ဘာလို့များ ဒီလို လုပ်ကြတာပါလိမ့် ကျူးလွန် ကြတာပါလိမ့် ရယ် လို့ အပြစ်တင်သော ဒေါသ…သဘောတွေ ကိုယ့်သန္တန် မှာ ဖြစ်ပေါ် လာလေ တိုင်း ကျေးဇူးတော်ရှင် ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးက ဆုံးမပေးတော်မူပါတယ်..။
သတ္တဝါတွေ မှား ကြရတာ မူလ နှစ်ဖြာ လေ လို့ တကယ်…. တကယ့် တရားခံ ဇစ်မြစ် *အဝိဇ္ဇာ နဲ့ တဏှာ* ကို သတိပြု ဘို့ တရားခံအစစ်ကို ထောက်ပြ ဆုံးမတော်မူခဲ့ပါတယ်..။
အမှားမှန်သမျှ သည် မသိခြင်း ဆိုတဲ့ အဝိဇ္ဇာ မှ ဖြစ်ဖျား ခံပြီး တဏှာ ဖြင့် ခရီးဆက်ကြတာ မဟုတ်ပါလား။
တကယ် တော့ တရားဆိုတာ အမှန်တရားကိုထောက်ပြ တည့်မတ်ပေးနိုင်တာပဲလေ..
ကြားနာရုံပင် အပူစင် လို့ ကျင့်လျှင်ချမ်းသာ လွန်စွာ ငြိမ်းအေး အမြိုက်ဆေး ဆိုတာ လက်တွေ့ သိရှိ ခံစားခဲ့ ပါတယ်..။
ဒါဟာ တရားဂုဏ်တော် ၆ ပါး ပေပဲ..။
ဒီတရားတွေကို လူတော သူတော အပူတောမှာ.. အေးမြ ငြိမ်းချမ်းစွာစီးဆင်းစေတဲ့အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်နေတာဟာ ဘဝထဲကို ဓမ္မ ရောက်အောင် ကြိုးစားနေတာပါပဲ လို့ကျွန်မ အခိုင်အမာယုံကြည်မိပါတယ်..။
အရေးအကြီးဆုံး ဖြစ်တဲ့ သံသရာ့ချောက်ထဲမကျအောင် ဆွဲထုတ် ကယ်တင်နိုင်သော အားကိုးရာ အစစ် အမှန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..။
မနှစ်က မွေးနေ့ မှာတော့ ဘုန်းဘုန်း က သူလျှောက်လှမ်းနေတဲ့ ဓမ္မစာပေလမ်းကြောင်းကို ဝါကြွားခြင်း မရှိပဲ ရိုးရိုးလေးဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်..။
***တခါတလေမှာတော့ စာတွေကို ဖတ်ပြီး စာရေးသူရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ခန့်မှန်းနိုင်တာမို့ ရေးရတာ တွန်ဆုတ်နေမိတတ်ပြန်တယ်၊ စာရေးတယ်ဆိုတာ တခါတလေ ငါတွေ့တွေနဲ့ များသောအားဖြင့် ရှေးရှေးသော သူတော်ကောင်း တို့ရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်း လိုက်လံလျောက်လှမ်းရတာမို့ စာတွေ့အားဖြင့် မျှဝေရတာမျိုးလဲ ရှိတတ်ပြန်တယ်၊ ကိုယ်ပိုင်လမ်းဆိုတာတော့ မရှိပါ၊ အဖမြတ်စွာရဲ့ လမ်းစဉ်အတိုင်း ဖော်လိုလိုက်ကာ လျောက်လှမ်းခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဓမ္မအသိလေးတခု မျှဝေနိုင်တယ်ဆိုရင်ပဲ ရေးရကျိုးနပ်ပါပြီလေ ….****
ဒီ လို ဒီလို ခံယူချက်တွေ နဲ့ ဘဝကို ဖြတ်သန်း လွန်မြောက် ကြသူ တွေကို ဘာဆုတွေ ပြည့်ချင်ပါသလဲ လို့ မေးမြန်းဘူးကြပါသလား။
တကယ်တမ်း မေးလာခဲ့ရင်တော့ အခုလို အများအကျိုးကို ဖေါ်ဆောင် ပေး နိုင် တဲ့ ဓမ္မစာပေရေးသား၊ဟောပြောခြင်း ၊ ပရဟိတ လုပ်ငန်းများ ကိုသာ စွမ်းစွမ်းတမံ ဆထက်ထမ်းပိုးဆောင်ရွက် ရပါစေလို့ သာ ဆုတောင်း မိကြမှာပါ..။
ဘဝ ထဲမှ* ငါ..ငါ..တစ်ငါ..ငါ ဖြင့် အပွားဆုံးဘဝမှသည်* *ငါသည် အပါးဆုံး* ဖြစ်အောင် လေ့ကျင့်ထုံမွှမ်းခဲ့ပြီ မဟုတ်ပါလား။
ဘုန်းဘုန်း ရဲ့ စိတ်နှလုံး ထဲမှာလည်း ဒီလို ပဲ ရှိမယ် လို့ ခန့် မှန်း ရတာမို့ ဓမ္မစာပေရေးသား၊ဟောပြောခြင်း ၊ ပရဟိတ ဆောင်ရွက် ခြင်း တို့ ကိုသာ စွမ်းစွမ်းတမံ ဆထက်ထမ်းပိုး တိုးတက် လုပ်ဆောင် နိုင်ပါစေကြောင်းသာ မွေးနေ့ ဆုတောင်း ပြုလျက် ဦးညွှတ်ကန်တော့ အပ်ပါတယ် ပန်းကမ္ဘာ ဘုန်းဘုန်းဘုရား။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 11:45 AM 1 မှတ်ချက်ရေးရန်
*ဘဝပန်းခင်း များပေါ် သို့ ဓမ္မ မိုးစက် ပွင့်များ*( ပ...